टिकटकबाट करोडौं कमाए भन्नेहरुको वास्तविकता बाहिरियो । बिजय शाही जस्तै दुनियाँ झुक्याउन खोजेका हुन त ? (भिडियो हेर्नुस) – Sandesh Press
October 7, 2021 426
यतिबेला टिकटक निकै लोकप्रिय बन्दै गईरहेको छ । टिकटकमा भिडियो बनाउसने कला देखाउने त छदैछ झनै हिजो आज लाईभ आएर गिफ्ट माग्ने, गेम खेल्नेहरुको लहर नै लागेको छ । समान्य मान्छे मात्रै हैन देशका नाम चलेका सेलिब्रेटीहरु पनि टिकटक लाईभमा आएर गिफ्ट माग्दै खेल खेलिरहेका छन् । पछिल्लो समय केहि टिकटकबाट करोड कमाए भन्दै मिडियामा आएपछि पुण्य गौतम पनि लाईभमा आए । त्यसपछि लाईभ बस्नेहरुको लर्को नै लाग्यो । टिकटकबाटै पैसा कमाईने रहेछ भन्ने थाहा पाएर सबै यो लयमा छन् ।
धेरैलाई टिकटकबाट पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छैन । धेरैले यो नभएको हल्ला चलाएको भन्दै केहि लाईभ होस्टरहरुलाई गाली पनि पनि गरिरहेका छन् । कतिले बिजय शाहीले जस्तै नचाहिदो हल्ला चलाएको भन्दै यसलाई सरासर गलत भएको पनि बताउँदै छन् । यसैबिच शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै एक लाईभ होस्टरले वास्तविकता बताएका छन् । उनले आफ्नो दैनिक कमाई देखाउँदै यस्तो भने । भिडियो हेर्नुस
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ । यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ।
आज बिहानै नित्यकर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दसैँ घरमा विधिपूर्पक राखेर त्यसमाथि यव अर्थात् जौ रोप्ने गरिन्छ।
यस कार्यलाई जमरा राख्ने पनि भनिन्छ । यव अङ्कुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज यव रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसितै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा पनि ग्रहण गरिन्छ।
जमरामा जौबाहेक अरु अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधि नभएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ । कूल परम्पराअनुसार कसैले अन्य अन्न पनि जौसितै रोप्ने गरेका छन् । जमरालाई आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ ।
आज घटस्थापनाको साइत बिहान ११ः४६ बजे रहेको समितिले जनाएको छ । आज दिनभर चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग परेकाले घटस्थापनाको साइतअघि चित्रा नक्षत्र र वैधृति योगको शान्ति गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । शास्त्रीय वचनअनुसार मध्याह्नकालमा अभिजित मुहूर्तको साइत घटस्थापनाका लागि दिइएको समितिले जनाएको छ।
सूर्योदयकालमा प्रतिपदा भएका दिनमा घटस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यताअनुसार नै समितिले आजको दिनलाई घटस्थापना भनी निर्णय गरेको पनि उनले दिए । दुर्गा देवीका तीन वटा रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा आराधना गरिन्छ । महाकाली शक्तिको प्रतीक, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको प्रतीक तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिककालदेखिको परम्परा छ ।
यो पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौँ दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ ।
यिनै नौ वटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ । आसुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाएकाले समस्त मानव जातिले नै दुर्गादेवीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय नियम छ ।
Prev३ बर्षीया वालिकाको मृ’त्यु भएपछि पाँचथर अस्पताल दिनभर त’ना’वग्र’स्त